लहान नगरका मेयर उम्मेदवार मुनी साहको आह्वान : रसातलमा पुगेको लहानको आर्थिक गतिविधिलाई फेरि उकास्न एमालेको जीत अनिवार्य छ – Rajdhani Daily
लहान नगरका मेयर उम्मेदवार मुनी साहको आह्वान : रसातलमा पुगेको लहानको आर्थिक गतिविधिलाई फेरि उकास्न एमालेको जीत अनिवार्य छ
समाज भनेको उनिएको माला हो । भावनात्मक रुपमा एक अर्काका सहयोगी र परस्पर सदभावका साथ मिलेर बस्ने आकंक्षा र सहिष्णुताले समाजलाई समुन्नत बनाउँछ । मात्र भौतिक विकासले समाजलाई उभो लगाउँदैन । समाजमा घृणा, द्वेष र वैमनस्यता छ भने भौतिक विकासहरु पनि खरानी भएर जान्छ । त्यसकारण पहिलो कुरा हो, समाजलाई मेलमिलाप र भाईचारामा गाँसेर शान्ति र सहिष्णुताको जग खडा गर्नु । आज यहाँ अनेकथरी उम्मेदवारहरुले यो गरीदिन्छु र त्यो गरिदिन्छु भनेर फुर्ती हाँक्दैछन् । तर सामाजिक मनोविज्ञानमा भएको नाकारात्मक असर कसैले देखेका छैनन् ।
ठुला व्यापारी र पुँजी यहाँवाट पलायन भयो । आफ्नै समाजमा मानिस मानिसबाट डराउनु पर्ने, समुदायहरुवीच अविश्वास, घृणा र द्वेष जन्माउने र डर तथा त्रासका कारण थात थलो छोडेर हिड्नु पर्ने अवस्था आयो । समाजमा द्वेष र घृणाको विजारोपण भयो । जसले गर्दा लहान नगरले आफ्नो वैभव गुमायो । व्यापार पतन भयो । शहरको बिकास अधोगतीतिर गयो । यसलाई फेरी पुनरुत्थान गर्नु छ । रसातलमा पुगेको लहानको आर्थिक गतिविधिलाई फेरि उकास्नु छ । सामाजिक सौहार्दतालाई पुनः जीवनत तुल्याउनु छ ।
लहान नगरको सत्व हराएको छ । सात्तो गएको मानिस जस्तो लाहान नगर निष्प्राण भएको छ । हिजो उदयपुर, धनुषा, सप्तरी र सिरहाकै विभिन्न भागवाट मानिसहरु सामान खरिद गर्न लहान वजार आउँथे । तर आज लाहानका मानिसहरु कपडा किन्नसमेत गोलवजार जानुपर्छ । व्यापार किन चौपट भयो लहानको ? कसैले सोचेको छ ? माओवादी द्वन्द्वकालमा लहान वजारमा हमला भयो । एक पटक होईन, दुई पटक हमला भयो । भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त पारियो । आज ती ध्वस्त पारिएका संरचनाहरु भग्नावशेष बनेर वजारलाई कुरुप बनाएको छ । चारैतिर सन्देश फैलियो, लाहान अशान्त ठाउँ हो । ठुला व्यापारी र पुँजी यहाँवाट पलायन भयो । आफ्नै समाजमा मानिस मानिसबाट डराउनु पर्ने, समुदायहरुवीच अविश्वास, घृणा र द्वेष जन्माउने र डर तथा त्रासका कारण थात थलो छोडेर हिड्नु पर्ने अवस्था आयो । समाजमा द्वेष र घृणाको विजारोपण भयो । जसले गर्दा लहान नगरले आफ्नो वैभव गुमायो । व्यापार पतन भयो । शहरको बिकास अधोगतीतिर गयो । यसलाई फेरी पुनरुत्थान गर्नु छ । रसातलमा पुगेको लहानको आर्थिक गतिविधिलाई फेरि उकास्नु छ । सामाजिक सौहार्दतालाई पुनः जीवनत तुल्याउनु छ । सामाजिक मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गर्नु छ ।
लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउनेहरुले जातीय कुरालाई महत्व दिनु हुँदैन । जातीय कुरा सामाजिक रहन सहन र साँस्कृतिक जगेर्ना गर्ने कुरामा मात्र सुहाउँछ । लोकतन्त्र राजनैतिक कुरा हो । राजनीतिमा जातीय बाहुल्यताले अर्को समुदायलाई प्रताडित गर्छ । जातीय राजनीति विषको वृक्ष हो । लोकतन्त्रमा जातीय नारा ग्राह्य हुँदैन । जातीय नाराले लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । कुनै खास जातिको मानिस साशन गर्न जन्मेको हो भन्नेहरु लोकतन्त्रका अनुयायी हुन सक्दैनन् । त्यस्ता छद्मभेषी र आडम्वरीहरुवाट आम मतदाता र जनता सावधान हुनुपर्छ
यो काम चानचुने काम होईन । एउटा दुरदर्शी नेतृत्व र शान्तिप्रिय नीति अंगाल्ने राजनैतिक दलवाट मात्र यो कार्य संभव हुन सक्छ । कतिपय उम्मेदवार र राजनैतिक दलहरुको चाहना नै छ, जितेर कुनै खास समुदायको दवदवा कायम गर्ने । तर हामी एउटा समुन्नत शहर लहानको स्थापना चाहन्छौं । हामी समाजमा जन्मिएको मनोमालिन्य, घृणा, द्वेष र अविश्वासलाई समाप्त पार्न चाहन्छौं । समुदायहरुवीच हार्दिकता बढाउन चाहान्छौं । यी कार्यहरु उग्रता देखाउनेहरु वाट संभव छैन । यसका लागि एमालेले जित्नै पर्छ । नत्र लहान नगरको सामाजिक शान्ति र सौन्दर्य हराएर जान्छ । मतदाताहरुले यहाँनिर गंभीरतापूर्वक सोच्न आवशयक छ । लहान नगरमा मुनी साह र सरियार चौधरीले जित्यो भने समाजमा अमन चयन, भातृत्व, सदाचार, सहिष्णुता र शान्ति कायम हुनेछ ।
लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउनेहरुले जातीय कुरालाई महत्व दिनु हुँदैन । जातीय कुरा सामाजिक रहन सहन र साँस्कृतिक जगेर्ना गर्ने कुरामा मात्र सुहाउँछ । लोकतन्त्र राजनैतिक कुरा हो । राजनीतिमा जातीय बाहुल्यताले अर्को समुदायलाई प्रताडित गर्छ । जातीय राजनीति विषको वृक्ष हो । लोकतन्त्रमा जातीय नारा ग्राह्य हुँदैन । जातीय नाराले लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । कुनै खास जातिको मानिस साशन गर्न जन्मेको हो भन्नेहरु लोकतन्त्रका अनुयायी हुन सक्दैनन् । त्यस्ता छद्मभेषी र आडम्वरीहरुवाट आम मतदाता र जनता सावधान हुनुपर्छ । विविधता नै सुन्दरता हो । समाजमा विभिन्न जात जातिको मानिस मिलेर बसे भने मात्र समाज सुन्दर हुन्छ । एउटा खास जातिको सधै सधै साशनमा बाहुल्यता समाजका अन्य वर्ग र तहका लागि घातक हुनजान्छ ।
समाजको विविधतालाई बचाउनु छ । त्यसकारण नीति प्रधान राजनीतिमा विश्वास गरौं । नीतिवान र आचरणशील नेतालाई छानौं । राजनीतिमा बाहुवलीहरुलाई परास्त गरौं । नत्र राजनीतिको अपराधिकरण हुन्छ र फेरि समाज प्रताडित हुनुपर्छ । विचार गरांै, एक व्यक्तिको गल्तीले समाजको थोरै भाग नष्ट हुन्छ तर आम मानिसहरुवाट भुलचुक भयो भने समाजलाई दीर्घकालिन रुपमा नाकारात्मक असर पर्छ । बिकास राजनीतिक कुरा हो । किनकी हाम्रो समाज वर्गीय छ । वर्गिय समाजमा बिकास पनि वर्गीय हितमा लक्षित हुन्छ । बिकाशले पनि वर्गको पक्ष लिन्छ । माक्र्सवादी दर्शनले भन्छ निरपेक्ष निष्पक्षता संभव हुन्न । नगरपालिकाले गर्ने बिकास पनि वर्गीय रुपमा पक्षपाती हुन्छ ।
मानिस को हो ? भन्दा पनि कुन कित्तामा उभिएको छ भन्ने कुरा राजनीतिमा महत्वपूर्ण हुन्छ । लहान नगरमा रहेका शहरी गरीवहरु, दलितहरु, महिलाहरु र अन्य अल्पसंख्यक वर्गहरुको उत्थानका लागि बिकास लक्षित हुनुपर्छ । सामन्त र जातीय दुर्भावनाले भरिएका व्यक्तिहरुवाट गरीव, दलित र अल्पसंख्यकहरुको हितमा वा पक्षमा काम हुन सक्दैन । बिकास हुन सक्दैन । २१ सौं शताव्दी हो अहिले । अहिले बिकासका कुरा सामाजिक न्याय र वातावरणीय न्यायसंग जोडिएको छ । लैगिंक न्यायसंग जोडिएको छ । बिकासले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, वातावरणीय र लैगिंक न्यायको ग्यारेण्टी कसरी गर्न सक्छ भन्ने सामान्य अवधारणा पनि थाहा नभएका राजनैतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरुले के बिकास गर्लान र ? उनीहरुलाई यति मात्र थाहा छ कि म फलानो समुदायको हुँ, फलानो क्षेत्रको हुँ र म फलानो पार्टी को हुँ त्यसकारण मैले जित्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा यो सर्वथा अनुचित हो ।
लहान नगरपालिका मेयरमा मुनी साह र उपमेयरमा सरियार चौधरी जित्यो भने एउटा सुरक्षित, सहिष्णु अमन चयनयुत्त समाजको आधारशिला खडा हुनेछ भन्ने जनविश्वास छाएको छ अहिले लहान नगरमा । आफू सरकामा पुगेका बेला जहिल्यै नि विकासमा प्रयाप्त बजेट छुट्याएका, सामाजिक सुरक्षामा गहन योगदान गरेका, बर्गिय आन्दोलनलाई जोड दिएका नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकाहरुले लहान नगरपालिकाको वजेटलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ ।
रोजगारी सृजना गर्ने र युवाहरुलाई स्वरोजगारमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने खालको बिकास कार्यक्रम ल्याइनेछ । उम्मेदवारहरुले गरीवको हातमा पुँजी पुर्याउँछु । गरीब दलितको थात थलो सुरक्षित बनाउँछु र उठीवासको भयवाट मुक्त बनाउँछु भन्ने घोषणा नै गरिसकेको छ । त्यति मात्र होइन अहिलेको जमानामा अत्यावश्यक सेवामा गनिने गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य , खानेपानी, सडक र विजुलीलाई हरेक घरको अधिकारको रुपमा कार्यान्वयन गर्छु भनि घोषणा पत्र नै सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवा केन्द्र र संस्थाहरुको स्तरोन्नति गरी सेवालाई गुणस्तरीय र द्रुत बनाउने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । नगरपालिका व्यक्तिअनुसार होईन विधि अनुसार चल्ने तथा लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार पूर्ण पारदर्शी बनाउने लक्ष्यका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । पछिल्लो समय पानी अभावमा बाझो रहेका जमिनलाई सिन्चित गर्न सिंचाई लाई पहिलो प्राथमिकतामा रहने भनि उद्घोष गरेको छ । लहान नगरपालिकालाई ५ वर्ष भित्र उप महानगरको दर्जामा पुर्याउने भौतिक संरचनाहरुको बिकास गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । दुर्गन्धमा बस्नुपर्ने शहरका मानिसहरुको बाध्यतालाई समाप्त पारिने छ । समाजका कमजोर वर्गहरुका लागि सामाजिक न्यायको प्रतयाभूति गर्न वृद्ध, अशक्त तथा वेसाहाराहरुको भत्तामा वृद्धि गरिने छ ।
महिला हिंसालाई न्युनिकरण गर्न विशेष कार्य गरिने छ । पर्यटन क्षेत्र नफस्टाएसम्म लहानको कायापलट नै हुँदैन । त्यसकारण पर्यटन बिकासको लागि संभाव्यता अध्ययन र सुन्दर नगरी लहानको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । पुरै लाहान नगरको वेसलाईन सर्भे गरी तथ्य तथ्यांकको आधारमा बिकासको रणनीति बनाईने छ । लहान नगरपालिका मेयरमा मुनि साह र उपमेयरमा सरियार चौधरी नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिँदा सार्वजनिक गरेको यी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विकासका एजेण्डालाई केलाउने हो भने अन्य दलका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुको तुलना गर्ने लायक समेत देखिदैन ।